HEBEI RUBANG CARBON PRODUCTS CO., LTD nyere onye ruru eru nke baogang united steel n'ihi nkwado kacha mma na ezigbo mma nke electrode na ngagharị, 2020. Baogang otu guzobere na 1954, bụ isi ihe eji emepụta ígwè na china na ụwa kachasị obere. ulo oru isi na ...
Graphite electrode ahịa global analysis akụkọ
DUBLIN, NOV. 30, 2020 amụma ahịa graphite electrode na 2027 - mmetụta covid-19 na nyocha ụwa site na ụdị ngwaahịa (ike dị elu, oke ike elu, ike oge); E tinyewo ya (ọkụ ọkụ aak, ọkụ ọkụ ndị ọzọ), na ọdịdị ala ”na nyocha ...
HEBEI RUBANG CARBON PRODUCTS CO., LTD mepụtara teknụzụ ọhụụ nke na - egbochi antioxidant ma nwee ihe ịga nke ọma na oct.
A na-eji teknụzụ nke mkpuchi antioxidant maka graphite electrode na electroite graphite nke igwe eletrik-arc steelmaking. ọ bụ site novolac epoxy, polyvinyl formal acetal, phosphoric acid, sịlịkọn carbide, sịlịkọn dioxide, mejupụtara dị ka aluminum oxide, ferric oxide, boron nitrid ...